Dukto dia safidy tsara hanindriana ireo fitaovana | Androidsis
Pushbullet, Airdroid, BitTorrent Sync ary maro hafa no iray amin'ireo tsara indrindra azontsika atao raha manana fitaovana marindrano mifangaro. Dropbox sy serivisy fitehirizana hafa dia tsara ihany koa fa mila ny Internet amin'ny asany marina izy ireo, ary BitTorrent Sync dia manampy betsaka fa indraindray manana olana maharitra. Amin'izy rehetra, ny iray izay nahasarika ny saina indrindra dia Pushbullet noho ny fahaizany miovaova ary ho iray amin'ireo serivisy tsy nampoizina tamin'ny 2014.
Androany isika mety mahita serivisy lehibe hafa toa an'i Dukto. Misongadina amin'ny maha haingana azy izy, tsy mila fidirana na fanamarinana ary mamela ny fampifanarahana haingana eo anelanelan'ny fitaovana. Angamba androany ianao mieritreritra fa Dukto no mety ho safidy tsara indrindra amin'ireo serivisy voalaza etsy ambony toa ny Pushbullet, Airdroid na BitTorrent Sync. Andao hojerentsika ny antony.
1 Dukto, serivisy loharano misokatra malalaka
2 Ny toetran'i Dukto
Dukto, serivisy loharano misokatra malalaka
Na dia tsy misy ifandraisany amin'ny fampifangaroana eo anelanelan'ny fitaovana aza ny Telegram, dia efa nanaporofo izany ny fomba nahatonga ny loharano misokatra nitazona kalitao avo kokoa ary farany mahatratra mpampiasa maro. Toy izany koa no mahazo an'i Dukto satria maimaim-poana sy loharano misokatra tanteraka izy io, ary azo alaina ho an'ny Android, Windows, Mac, Symbian, Blackberry, iOS, Windows Phone ary Linux. Ny mpamorona ao ambadik'ity rindrambaiko ity dia Emanuel Colombo ary avy amin'ny zavatra hitantsika fa manana filàna mialoha lehibe ho an'ny UI UI an'ny Microsoft izy. Angamba iray amin'ireo fahalemeny io raha efa zatra manao Design Material ianao.
Miaraka amin'i Dukto dia mila manana ianao ny fitaovana mifandray rehetra amin'ny tambajotra Wi-Fi eo an-toerana ihany mba hiasa tsara. Rehefa mandefa ilay rindranasa amin'ny Android sy amin'ny dikanteny birao dia ho hitanao ny anaran'ireo solosaina hafa hahafahana mandefa azy ireo lahatsoratra, rakitra na lahatahiry feno. Rehefa misafidy ny fisie na ny safidin'ny fampirimana dia hamakivaky ny mpikaroka rakitra avy aminay hitantanana tsara ny fandefasana.
Ny toetran'i Dukto
Tsy mila fanamboarana izany, miasa eo an-toerana tsy misy Internet, loharano malalaka sy misokatra ary mamela famindrana rakitra haingam-pandeha. Tsy hanasarotra an'i Pushbullet izany, satria manana ny heriny lehibe amin'ny fahaizany maro izy, fa raha mitady safidy tsara kokoa noho ny Airdroid ianao handefasana rakitra na amin'ny rahona toa an'i Dropbox aza dia napetraka ho fampiharana lehibe i Dukto.
Manana ny toetra rehetra hanaovana azy io ho serivisy fandefasana rakitra sy serivisy fampitahana Rehefa ao an-trano ianao, ary afaka tanteraka, dia tsy ho very na inona na inona ianao amin'ny fanandramana izany ary amin'ny fanapahana hevitra raha tena misy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Dukto, safidy tsara hafa amin'ny Pushbullet sy Airdroid
Diso ny fandraisanao ny rohy Google Play, mitarika amin'ny lalao Final Fantasy fa tsy ilay voalaza ao amin'ilay lahatsoratra.
Hector D 'Argenta dia hoy izy:
Te hanana rindranasa mamela ahy hamindra rakitra avy amin'ny toerana iray amin'ny toerana iray fotsiny aho, ary tena tsara izany ataon'i Dukto. Tsy mila fiasa hafa intsony aho. Recommended.
Valiny tamin'i Héctor D 'Argenta
Reyes Cedeno dia hoy izy:
Tsy mila ampiana, misy kinova ho an'ny Symbian, Blackberry, iOS ary Windows Phone.
Valiny tamin'i Reyes Cedeño
Marina indrindra. Fampidirana nohavaozina. Misaotra!
Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny checker amin'ny Android
Voasivana ny famaritana ny takelaka HTC T1H misy efijery 8.9 "sy fakan-tsary 16MP any aoriana